ỤZỌ DỊ ICHE ICHE IJI JIRI EKWENTỊ EKWENTỊ GỊ NA MBADAMBA ỤRỌ - N'IHI BEGINNERS - 2019
Ụzọ dị iche iche iji jiri ekwentị ekwentị gị na mbadamba ụrọ
Ọtụtụ ndị nwe ngwaọrụ Android na-eji ha dị ka ọkọlọtọ: maka oku na ozi, gụnyere ndị ozi, dịka igwefoto, maka ilele weebụsaịtị na vidiyo, na dịka ihe mgbakwunye na netwọk mmekọrịta. Otú ọ dị, nke a abụghị ihe niile smartphone gị ma ọ bụ mbadamba.
Na nyocha a - ụfọdụ ihe (ọ dịkarịa ala maka ndị ọrụ novice) ihe ngosi maka iji ngwaọrụ gam akporo. Ikekwe n'etiti ha ga-abụ ihe ga-aba uru maka gị.
Kedu ihe ngwaọrụ gam akporo nwere ike ịchọta
M ga-amalite site na nhọrọ "nzuzo" kachasị dị mfe ma ọ bụ na-erughị ya (ọtụtụ ndị mara, ma ọ bụghị ha niile) ma nọgide na-eji ngwa ndị ọzọ dị na ekwentị na mbadamba.
Nke a bụ ndepụta nke ihe ị nwere ike ime na gam akporo gị, ma ị nwere ike ghara:
Ikiri TV na gam akporo bụ ihe ọtụtụ ndị na-eji, na, otu oge ahụ, ọtụtụ anaghị aghọta nke a. Ma ọ nwere ike ịbụ ezigbo adaba.
Ịfefe ihe oyiyi si na Android gaa na TV site na Wi-Fi nwere ike mgbe ụfọdụ ịbịaru aka. Ọtụtụ smartphones na ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ TV niile nke oge a na-akwado wireless mgbasa ozi wireless Wi-Fi.
Ịchọpụta ọnọdụ nwa ahụ site na iji ọrụ nlekọta ndị nne na nna, Echere m, ọ ga-abụkwa ọtụtụ ndị mara nke a, ma ọ bara uru icheta.
Jiri ekwentị dị ka ebe dịpụrụ adịpụ maka TV - ole na ole ndị mmadụ amalarịrị banyere ya. Na ohere dị otú ahụ maka ọtụtụ TV ndị dị ugbu a na Wi-Fi na ụzọ ndị ọzọ iji jikọọ na netwọk dị. Enweghị onye nnabata IR: budata ngwa ngwa ntanetị, jikọọ ya, malite iji ya na-achọghị njikwa ntanetị mbụ.
Mee igwefoto IP gam akporo nke gam akporo - enwere ugbua ekwesighi ekwesighi ighota uzuzu n'elu oche? Jiri ya dị ka igwefoto onyunyo, ọ dị mfe ịhazi ma rụọ ọrụ nke ọma.
Jiri Android dị ka egwuregwupad, igodo ma ọ bụ keyboard maka kọmputa - dịka ọmụmaatụ, maka egwu egwuregwu ma ọ bụ maka ịchịkwa ngosi ngosi PowerPoint.
Iji mee ka mpempe akwụkwọ na gam akporo na nyocha nke abụọ maka kọmputa - ma nke a abụghị ihe gbasara mgbasa ozi nke ihuenyo ahụ site na ihuenyo ahụ, ya bụ, iji ya dịka nyocha nke abụọ, nke a na-ahụ na Windows, Mac os ma ọ bụ Linux na ihe niile nwere ike ime (dịka ọmụmaatụ, iji gosipụta ọdịnaya dị iche iche na abụọ monitors).
Control Android site na kọmputa na ntụgharị - na-achịkwa kọmputa site na Android. E nwere ọtụtụ ngwaọrụ maka nzube a, nwere ike iche: site na ntinye faịlụ dị mfe iziga SMS na ikwurịta ozi na ngwa ngwa site na ekwentị site na kọmputa. Enwere ọtụtụ nhọrọ maka njikọ ndị a.
Kesaa ịntanetị Wi-Fi na ekwentị gị na laptọọpụ, mbadamba na ngwaọrụ ndị ọzọ.
Mepụta ngwa ngwa USB USB maka kọmputa gị na ekwentị gị.
Ụfọdụ ụdị smartphones nwere ike iji dịka kọmputa site na ijikọta na nyocha. Dịka ọmụmaatụ, nke a bụ otú o si ele Samsung Dex anya.
O yiri ka nke a bụ ihe m dere na saịtị na ihe m nwere ike icheta. Ị nwere ike ịnye ndụmọdụ ọzọ na-adọrọ mmasị? M ga-enwe obi ụtọ ịgụ banyere ha na ihe ndị ahụ.